1 SAMOELA 21.1-15 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 SAMOELA 21.1-15 F. 2
Mamonjy aina. Handositra an’i Saoly izay mitady hamono azy i Davida no tonga tany amin’ity toerana antsoina hoe Noba izay manodidina an’i Jerosalema ihany no misy azy. Rehefa manavotra aina tokoa dia manjary mipepipepy ka tonga tsy fidiny amin’ny toerana tsy ampoizina kanefa ny mahavariana sy mahafinaritra dia mandray an-tanana mandrakariva ny fiainan’ny mpanompony Andriamanitra amin’ny zava-mitranga rehetra. Teto anefa dia mbola nisy olana iray hafa nitranga fa matin’ny hanohanana i Davida ka voatery nangataka mofo tamin’i Ahimeleka Mpisorona. Tsy nisy ny mofo tsotra fa ny mofo masina izay fihinan’ny Mpisorona irery ihany no nisy.
Ny fahadiovana. Io no hany fepetra takiana mba ahafahana mihinana ny mofo masina. Rehefa nahafeno ny fepetra i Davida fa madio, tsy nikasi-behivavy dia nomen’i Ahimeleka Mpisorona ny mofo masina hohaniny. Tahaka izany tsy misy hafa ny fanasan’ny Tompo voambara ao amin’ny 1Korintiana 11.27, 29 : ”Koa na zovy na zovy no mihinana ny mofo sy misotro amin’ny kapoaky ny Tompo amin’ny fanahy tsy mendrika dia ho meloka ny amin’ny tena sy ny ran’ny Tompo izy. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana hoan’ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy”.
Famonjen’Andriamanitra. Rehefa niala tao Noba i Davida dia lasa indray ka tonga tany Gata izay nisy an’i Akisy mpanjakan’ny Filistina izay tena fahavalo goavana sy henjana hoan’ny Zanak’Isiraely. Fa mbola novonjen’Andriamanitra izy tamin’ny nanaovany fihetsika mody adala ka nandroahan’i Akisy azy hiala teo amin’ny taniny.
Famporosihana : Mila matoky an’Andriamanitra amin’ny fiainana rehetra isika fa mamonjy Izy na dia amin’ny fomba faran’izay tsotra aza.